Beckham: Ibrahimovic & Xulafadiisu Way Ka Reebi Karaan Chelsea Horyaalka Champions League
HomeChampions LeagueBeckham: Ibrahimovic & Xulafadiisu Way Ka Reebi Karaan Chelsea Horyaalka Champions League
David Beckham ayaa ku adkaystay in xidigaha Zlatan Ibrahimovic iyo Thiago Silva ay ka caawin karaan Paris Saint-Germain inay ka reebto Chelsea oo dibada ka dhigto horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League.
Kooxda Reer Paris oo ay The Blues ka tukhaan tukhiyeen xili ciyaareedkii ay ugu fiicnaayeen ee 2012-13 kulamdii rubuc dhamaadka ahaa, ayaa iyadu doorkan ku soo gudubtay guushii ay ka gaadheen kooxda Bayer Leverkusen wareegii 16 ka ee xili ciyaareedkan.
Beckham, oo ku qaatay qayb kamid ah sanadkii hore naadiga PSG, ayaa rumaysan in kooxdiisii hore ay mugdi gallin karto, isla markaana meeshaba ka saari karto rajada ciyaaryahanada tababare Mourinho ee u gudbida wareega 8 da .
“Markasta oo ay dadku igu soo hadal qaadaan PSG waan muusoodaa, maxaa yeelay waxaan halkaas ku soo qaatay lix bilood oo farxad ah oo aan la qaatay ciyaaryahanadii aan ka garab ciyaarayay, taageerayaashii, naadigani waa koox weyn ,” Ayuu ciyaaryahankii hore ee kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ku yidhi Telefishanka beIN Sport.
“Waxa naadiga la iigu soo dhaweeyey si gacmo furan ah, waxaanan joogay lix bilood oo cajiib ah. Kaalinta ay ku jiraan… waxay haystaan koox quwad leh, oo ay kamid yihiin ciyaaryahano awood badan.
“Mulkiilayaasha haga naadigu, waxay doonayeen kooxda ugu fiican, waxaanay heleen kooxdii ugu wanaagsanayd. Thiago Silva, hadaan ka soo qaado, waa difaaca ugu fiican aduunka.
“Zlatan waa hogaamiye, sidoo kalena waa mid kamid ah ciyaaryahanadii ugu fiicnaa ee aan ka garan ciyaaro . Waa shaqsi qiimo leh. Waa ciyaaryahan aan jeclahay ka ag ciyaaristiisa.
“Waxay ila tahay inay haystaan fursadii dhabta ahayd ee ay ku hanan lahaayeen Champions League sanadkan. Waxay ka hortagi doonaan kooxda Chelsea, oo uu hor-kacayo Jose Mourinho, kooxda wuxuu gaadh siiyey heersare. laakiin ilama aha inay fursad fiican helli doonaan.”
Liiska Kooxaha Mushaharka Ugu Badan Bixiya Iyo Naadiyada Kubada Gacanta Oo Ugu Sareeya